अपहरण र बलात्कार गर्ने अबि सबै दोषी लाई कारवाही गरेरै छाड्ने बादलको घोसणा - info4nepal
अपहरण र बलात्कार गर्ने अबि सबै दोषी लाई कारवाही गरेरै छाड्ने बादलको घोसणा
गत साउन २० को बेलुका करीब ९ बजे त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अति विशिष्ट कक्षमा गृह मन्त्री रामबहादुर थापा अन्य सरकारी अधिकारीहरू समेतको टोलि लिएर इन्डोनेसिया प्रस्थान गर्ने तयारीमा थिए ।
उनि बालीमा साउन २१ र २२ गते हुन गइरहेको मानवतस्करी, बेचबिखन र अन्तरदेशीय अपराधसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा भाग लिन गएका हुन् । उक्त कक्षमा विदाई सहित शुभकामना लिँदै गर्दा उनको मनमा के कुरा खेलिरहेको थियो होला ?
त्यो दिनभन्दा अघिल्ला केही दिनदेखि नै गृहमन्त्री र रक्षामन्त्रीको जिम्मेवारी साटफेर गर्ने अपुष्ट खबरको हल्ला चलिरहेको थियो ।
जनदिशाले नेकपाका केहि नेताहरूसँग कुरा गरेर मिडिया बजारमा चलेको त्यो हल्लालाई पुष्टि गर्ने प्रयत्न पनि गरेको थियो, तर पार्टीभित्र त्यस्तो कुनै निर्णय नभएको भनेर नेताहरू पन्छिएका थिए तर ‘भित्री श्रोत’को नामबाट आउने यस्ता समाचारहरूको सत्यता कति छ ?
भर्खरै एकीकरण भएको पार्टी सतहमा शान्त देखिए पनि भित्र-भित्र ठूल-ठूला उथलपुथल हुने गरेको छ । नबोली बस्नै नसक्ने प्रचण्डको भनाइ फेला पार्न मिडियाकर्मीलाई हम्मे-हम्मे परेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओली केही उखान टुक्का, समृद्धिका भाषण र सरकारको नीतिको बचाउ गर्ने विषयमा भन्दा अन्य विषयमा बोलेकै छैनन् ।
अलि-अलि बोल्न थालेका गोकुल बास्कोटा विवादमा परे । रवीन्द्र अधिकारी विवादमा छन् । रघुवीर महासेठ उस्तै विवादित छन् ।
लालबाबु पण्डितलाई कर्मचारीले नै चुप बनाइदिए भने वर्षमान पुन र शक्ति बस्नेत केही बोल्ने आँट गरेका छैनन् । केही बोल्ने र गर्ने आँट गर्यो भने विवादको सृजना हुन्छ, त्यसैले अन्य मन्त्रीहरू चुप छन् । ‘रेड जोन’मा पर्ने खतरा उस्तै छ ।
मन्त्रीमण्डलमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा यस्ता मन्त्री हुन्, जसले प्रशस्तै बोलेका छन् र प्रशस्तै गरेका छन् । बोल्ने, काम गर्ने तर विवादमा नआउने नेपालको राजनीतिमा एकदमै विरलै हुने घटना हो । जसको प्रतिनिधित्व थापा स्वयं गर्छन् ।
दोश्रो नम्बरमा श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्ट पर्छन् । कम बोले पनि वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा रहेका विकृति हटाउन उनि लागिपरेका छन् ।
धेरैलाई थाहा छ र केही राष्ट्रिय ‘ब्रोडसिट’ दैनिकले पनि मन्त्रीमण्डल गठन हुनुभन्दा अगाडि हालका रक्षामन्त्री ‘ईश्वर पोख्रेलले गृहमन्त्रालयमा चासो देखाएका छन्’ भन्ने समाचार लिक गरेका थिए । त्यतिबेला दुवै पार्टी संयुक्त गठबन्धनमा थिए ।
एकीकरण भैसकेको थिएन र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तको आधारमा पनि गठबन्धनको अर्को महत्त्वपूर्ण पार्टीले गृहमन्त्रालय सम्हाल्नु पर्ने आवश्यकता थियो र रामबहादुर थापा गृहमन्त्री बनेका थिए । त्यतिबेला ईश्वर पोख्रेलले आफ्नो भित्री चाहनाको बली दिन तयार भए तर अहिले अपुष्ट बजारु हल्लाहरूले पोख्रेलको भित्री चाहना पुनः पलाएको जस्तो देखाएको छ ।
अपहरणकारी भनिएका दुईजनालाई डेराबाट पक्राउ गरेर जंगलमा लग्नु र मुठभेडको नाम दिएर हत्या गर्नु कुनै पनि कोणबाट न्यायिक लाग्दैन । घुमाउरो तरिकाले गृहमन्त्रालयलाई यसको दोष लिन लगाएर बादलको राजिनामा मागिए कसैले अनौठो मान्नु नपर्ने स्थितिको सृजना भएको छ ।
सामाजिक संजालदेखि चोक, चौतारी र चियापसलमा सरकारको सफलताको प्रमुख कारण गृहमन्त्री थापाको सफलता हो भनेर व्याख्या गर्ने गरिएको छ । समकक्षीले गरेको प्रगति र धानेको विरासतलाई टेढो नजरले हेर्ने हरेकको मानवीय स्वाभाव नै हो ।
गृहमन्त्री थापालाई टेढो नजरले कसैले हेरिरहेको छ भने त्यो पार्टी भित्र कै नेता र सरकार भित्रको मन्त्रीबाहेक अरू को हुन सक्छ ? अझ सुनकाण्ड छानबिनमा बादलले देखाएको सक्रियता र प्रधानमन्त्रीले देखाएको निष्क्रियताले थप यहाँ नभनिएका कतिपय अन्य कुराहरूको पनि पुष्टि गर्छ ।
बादलको अर्को प्रयास यातायातमा देखिएको सिन्डिकेटलाई कुनै पनि हालतमा खारेज गर्नुपर्छ भन्नेमा थियो । यही साउनबाट यातायात समितिहरू नवीकरण र नयाँ दर्ता नगर्ने भनिए पनि यातायात मन्त्रालयले त्यसको विकल्पमा अन्य कुनै बाटो तयार गरेन ।
यातायात समिति खारेज गरेमात्र सिन्डिकेट हट्छ भन्ने बुझेर सबभन्दा पहिला समिति नवीकरण या दर्ता नगर्ने निर्णय गरेका यातायात विभागका महानिर्देशक रुप नारायण भट्टराईलाई अन्तै सरुवा गरेर यातायात मन्त्रीले गृहमन्त्रालयको सिन्डिकेट हटाउने प्रयासमा पानी छम्किदिइएको थियो ।
यातायात मात्र नभएर भौतिक पूर्वाधार तथा निर्माणको पनि जिम्मा लिएका मन्त्री महासेठले ठेक्का हात पारेर वर्षौंसम्म काम नगर्ने ठेकेदार माथि गृहमन्त्रालयले लिन लागेको ‘एक्सन’माथि प्रतिगामी भूमिका खेलिदिए ।
महासेठले गृहमन्त्री थापालाई नै अपदस्त गर्न सकिने चेतावनी दिएका थिए । केही दिन अगाडि जनदिशासँग यही विषयमा कुरा गर्दा गृहमन्त्री बादलको ‘टोन डाउन’ भएको प्रष्ट देखिएको थियो । निर्माण व्यवसायीहरूले काम नगरेर सरकारलाई दुख दिने नियत भएको राम्रोसँग बुझेका मन्त्री थापाले तिनीहरूमाथि लिन लागिएको एक्सन ‘सत्ता र पार्टीसँग जोडिएका उच्चतह’लाई मन परेको छैन भन्ने बुझेपछि पछि हट्न बाध्य भएका छन् ।
देशमा भैरहेका विभिन्न अपराधिक क्रियाकलाप प्रति प्रहरी प्रशासनको चासो कम हुँदै गइरहेको छ । प्रहरी निकम्मा हुनु भनेको गृहमन्त्री निकम्मा हुनु हो भन्ने खालको सस्तो प्रचारबाजी फैलाउने प्रयास भैरहेको छ । कन्चनपुरमा १३ वर्षे बालिकामाथि भएको नृशंस बलात्कार र हत्याको घटनालाई जनताको नजरबाट हटाउन प्रहरीले भक्तपुरको ठिमीमा शंकास्पद ‘इन्काउन्टर’ गर्यो ।
संयोगवश इन्काउन्टरको उक्त घटना गृहमन्त्री इन्डोनेसियामा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको कार्यक्रममा व्यस्त हुँदा घटाइएको थियो । त्यो या त प्रहरीको फुली थप्ने प्रयास हुन सक्छ, या त गृहमन्त्रीलाई असफल देखाउने प्रयास हुन सक्छ कि त दुवै हुन सक्छ । यहाँ दोश्रो र तेस्रो कारण हुनसक्ने आँकलन गर्न सकिन्छ । सुनकाण्डको छानविनमा गृहमन्त्री बादल पछी नहट्ने संकेत देखिपछी एकाएक उनलाई असफल गराउने नियतवस कुनै न कुनै काण्ड घटाउने अनि उनलाई बदानाम गराउने प्रयत्न हुनथालेको पनि हुनसक्छ । यसो भएमा मन्त्रालय सट्टापट्टाको पुरानो हल्लाले पनि हावा पाउने थियो भन्ने एकथरिको चाहना पनि हुनसक्छ ।
गृहमन्त्रालय दोश्रो सरकार हो । देशभरका तीन करोड जनताको सुरक्षा गर्नु गृहमन्त्रालय र गृहप्रशासनको काम हो ।
जनताको दैनिक गुनासो, दैनिक व्यवहारमा आईपर्ने अप्ठेरो लगायत यस्ता हजारौं मुद्दाहरू छन्, जुन सिधै गृहमन्त्रालयसँग जोडिएका छन् । सरकारको अर्धवार्षिक परीक्षामा गृहमन्त्रालयलाई ‘गृहप्रशासन’नामको विषयमा फेल गर्ने तयारी रहेको चारैतिरबाट प्रष्ट बुझिएको छ ।
असक्षमलाई प्रश्नपत्र चोरी गराएर निरन्तरता दिलाउने र सक्षम देखिएका बादललाई ‘मुन्ना भाई एमबिबिस’को प्रोफेसरले गरेजस्तै एकदम कठीन प्रश्नपत्र हल गर्न लगाएको जस्तो देखिएको छ ।
इन्डोनेसियाबाट साउन २३ गते फर्किने तालिका रहेका थापा सोही विशिष्ट कक्ष हुँदै बाहिर निस्किँदा के सोचिरहेका हुनेछन् ? चासोको बिषय यही छ ।
संविधानमा येति कुरा टासीदे कि बलात्कारिलाइ फाँसी दे : सहमत हुनेले शेयर गरौ
सरकार र पानी बिच प्रतिस्पर्धा हुँदै छ, कसले पहिला देश डुबाउने भनेर
ranjan July 14, 2018
पुस महिनाको साप्ताहिक राशीफल, श्रीपशुपतिनाथले सबैको कल्याण गरुन